Kedu Ka thentanetị Ga-adị na Narị Afọ Na-abịanụ? | Martech Zone
Iche na ụmụ m na-etolite na ọgbọ ebe Internet dị mgbe niile dị ịtụnanya. Eziokwu ahụ bụ na anyị esila na ntanetị dị mfe iji nweta ọtụtụ ngwaọrụ n'ụlọ anyị ndị jikọtara, ndekọ, ma nyere anyị aka ịnyagharịa kwa ụbọchị dị ịtụnanya. Iche 100 afọ site ugbua gabigara ọhụụ m. Site na ntiwapụ nke ekwentị na ngwaọrụ anyị na-adịwanye ike, enwere m ike ịkọ na ngosipụta ga-adị ebe niile ma ngwaọrụ mkpanaka anyị ga-abụ ihe niile anyị nwere n'akụkụ igwe ojii.
O doro anya na ihe niile ga-ejikọrọ na kachasị. Ndị igwe friji anyị ga-atacha nri anyị ozugbo ma nweta ihe niile, site na akwụkwọ nri, maka nri anyị na-eme atụmatụ. Carsgbọ ala anyị ga na-anya onwe ha. Enwere m ike iche n’echiche ụfọdụ n’ime anyị ga-ewepụta onwe ha ịrụ ọrụ oge niile - ikekwe na akụrụngwa akụrụngwa maka ịdekọ anya anyị na igwe okwu anyị ka achọrọ. Anyị ga-enwe ụfọdụ ụdị ntule iji bulie ngwa ma ọ bụ izi ozi anyị ebe ọ bụla anyị nọ - yana ọdịyo na vidiyo na-enweghị nsogbu. Ikekwe mpịachi ma ọ bụ mpịachi ga-adị na akpa anyị.
Echere m na anyị ga-enwekwa ihe ọjọọ, kwa. A ojii Intanet nke ahụ bụ ihe kachasị ụjọ nke mmadụ na-enweghị aha na-eche iji nye gị ihe ọ bụla ịchọrọ na ncha anya nkịtị. Ok… achoghi m iche maka nke a ozo.
Tags: 100 afọ201421102111211221132114narị afọinternetịntanetị 100 afọTechnology